ယေရှုသည် ဘုရားလော (သို့) သားတော်လော။ (Is Jesus God or the Son?) | New Light Myanmar Jesus son of God myanmar Is Jesus God or the Son?
ယနေ့တွင် ခရစ်ယာန်တို့အား အမေးမြန်းခံရဆုံးမေးခွန်များထဲတွင် “ယေရှုသည် ဘုရားလား၊သား တော်လား” ဆိုသည့်မေးခွန်သည်လည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်များ အနေဖြင့် ဖြေရှင်းမည်ဆိုပါက ရုတ်တရက် ဖြေရန်မလွယ်ကူပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ယေရှုသည် ဘုရားလည်းဖြစ်သား လည်းဖြစ်သည်။ ဤမေးခွန်းကိုဖြေရန်မှာ သမ္မာကျမ်းစာ၏ဆိုလိုရင်းကိုကောင်းစွာ နားလည်သဘောပေါက်ရန်လို သည်။ သမ္မာ ကျမ်းစာတွင် ယေရှုသည်ဘုရားအဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊သားအဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ လူသား အဖြစ်သော် လည်းကောင်း၊ရှင်ဘုရင် အဖြစ်သော်လည်းကောင်း ကြိမ်ဖန်များစွာဖော်ပြထားသည်။
ခရစ်တော်၏ သရုပ်အမှန်ကိုနားမလည်သူများအဖို့ ရှုပ်ထွေးစရာကောင်းသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်ခရစ်ယာန်အတော်များများမှလည်း ဤအချက်ကိုကောင်းစွာ သဘောမပေါက်ကြပေ။ သမ္မာကျမ်းစာ တွင် ဘုရားနှင့်ဆိုင်သော သားဖြစ်ခြင်း (Divine Sonship) သည် လူသားတို့၏ သဘောသဘာဝကဲ့သို့မှတ်ယူ၍ မရနိုင်သည်ကို သတိပြုဖို့လိုအပ်ပါသည်။ဘုရားသခင်မှ ယေရှုအား “သား” ဟုသုံးနှုံးထားခြင်းသည် သုံးနှုံးသည့် စကားထက်ပို၍လေးနက်ကြောင်းကို ဦးစွာ သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်သည်။သားဟုဆိုရာ၌ လူတို့နားလည်နိုင် သည့် လူ့ဘာသာစကား (Anthropomorphic Term) ကိုအသုံးပြုကြောင်းနားလည်ရသည်။ထို့ကြောင့် ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးမှ တင်ပြချက်များအားလက်လှမ်းမှီသလောက် တင်ပြရန် စိုင်းပြင်းခဲ့ပါသည်။
ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏သားတော် (Jesus the Son of God)
သမ္မာကျမ်းစာတွင် ကြိမ်ဖန်များစွာ ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ဤစကားစုသည် ၄၄ ကြိမ်ခန့်တွေ့ရသည်။ ယေရှုကိုယ်တိုင် မိမိသည်ခမည်း တော်စေလွှတ်တော်မူသောသူ ဖြစ်ကြောင်း ကြိမ်ဖန်များစွာ ဖော်ပြခဲ့သည် (မဿဲ ၂၆း၆၄၊ ယော ၁၉း၇)။ ဤနေရာတွင် သတိထားရမည့်အချက်မှာ ဘုရားသခင်သည် လောကလူသားများကဲ့သို့ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ကာ ကလေးရရှိလာခြင်းမဟုတ်ပါ။ဘုရားသခင်နှင့် ဆက်နွယ်ခြင်းကို ဖော်ပြပေးသည့် စကားစု ဖြစ်သည်။ “သား” ဟုသုံးနှုံးတိုင်း မိမိ၏ ဦးစွာမြင့်မြတ်ခြင်း၊သန့်ရှင်းခြင်းနှင့် ခမည်းတော်နှင့် ဆက်နွယ်ခြင်းကို ပေါ်လွင်စေသည်။ ယေရှုမွေးလာမည့်အချိန်တွင် ကောင်းကင်တမန်မှ မယ်တော်မာရိအား မွေးလာမည့် သားယောက်ျားသည် “ဘုရားသခင်၏ သားတော်” ဟုခေါ် ရမည့်အကြောင်းအတိအလင်းပြောထား သည် (လုကာ ၁း၃၅)။
ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကို ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟု ခေါ်ဆိုခြင်းကြောင့် ဂျူးဘာသာရေးခေါင်းဆောင် များနှင့် ပြဿနာအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ယေရှု၏စကားများက မည်သို့ဆိုလိုသည်ကို ထိုဘာသာရေးခေါင်း ဆောင်များမှ ကောင်းစွာနားလည်ကြသည်။ယေရှုသုံးသည့် ဘုရားသခင်၏ သားတော်ဆိုသည်မှာ ဘုရားနှင့် “သဘောသဘာဝတူညီခြင်း၊တစ်လုံးတစ်ဝတည်း ဖြစ်ခြင်း” ကိုဆိုလိုသည်။ဟေဗြဲ ၁း၃ တွင် ယေရှုသည် ဘုရား သခင်၏ဘုန်းတော်ရောင်ခြည်နှင့် ဇာတိဖြစ်တော်၏ ပုံသဏ္ဍာန် ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားသည်။ ဆိုလို သည်မှာ ယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏ သဏ္ဍာန်ကို ဇာတိတော်အားဖြင့် ဖော်ပြသူပင်ဖြစ်သည်။
“သား” ဟုဆိုရာ၌ သမ္မာကျမ်းစာ၏အသုံးအနှုံးသည်တစ်ခြားစကားများနှင့်မတူကြောင်းကိုသတိပြုရမည် ဖြစ်သည်။ယုံကြည်သူများအား အလင်း၏သားများအဖြစ်ဖော်ပြလျက်ရှိပြီး (၁ သက် ၅း၅) မယုံကြည်သူများကို မူ မာရ်နတ်၏သားများ အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်။ရှင်ယောဟန် ၈း၄၄ တွင်ခရစ်တော်ကိုဆန့်ကျင်သူများသည် မာနတ်မှဆင်းသက်သူများ၊မာရ်နတ်ကို အဘတော်သူများဖြစ်ကြောင်းယေရှုအတိအလင်း မိန့်ထားပါသည်။ဆိုလို သည်မှာ “သား” ဟုဆိုရာ၌ တော်စပ်မှုကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ယုံကြည်သူများသည် မိမိတို့ တို့အမူကျင့်များအားဖြင့် အလင်း၏သဘောသဘာဝကိုထင်ဟပ်စေသကဲ့သို့ မယုံကြည်သူများသည်လည်း မိမိ တို့အမူအကျင့်ဆိုးများအားဖြင့် မာရ်နတ်နှင့် မိမိတို့ဆက်နွယ်တော်စပ်ခြင်း သဘောကိုဖော်ညွှန်း ပေါ်လွင်စေခြသည်။
ထို့အပြင် ယေဟန် ၁၇း၁၂ တွင်လည်း ရုဒရှကာရုတ် အား “ပျက်စီးခြင်း၏သား” ဟုခေါ်တွင်ထားသည် ကိုတွေ့ရသည်။ယုဒသည် အမှန်တကယ် ပျက်စီးခြင်းမှမွေးဖွားလာစေသော သားမဟုတ်ပေ။သို့ရာတွင် ဤစကားစုသည် ယုဒ၏ ဘဝအခြအနေမည်မျှ ပျက်စီးယိုယွင်းနေကြောင်းကိုထင်ဟပ်စေသောစကားစုသာလျှင် ဖြစ်သည်။ထိုနည်း၎င်းပင် ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏သားဟုဆိုရာ၌ သူသည်ဘုရားသခင်၏သဘောသဘာဝကို ထင်ဟပ်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။အဓိကအားဖြင့် ယေရှုသည် ဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို ဖော်ညွှန်းလိုရင်း ဖြစ်သည်။
ယေရှုသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည် (Jesus is God)
ယနေ့ခရစ်ယာန်များအားအထက်တွေ့စေသ ည့် မေးခွန်းမှာ ယေရှု၏ဘုရားဖြစ်ခြင်း (The Deity of Jesus) ပင်ဖြစ်သည်။သမ္မာကျမ်းစာတွင် ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဘုရားအဖြစ်မကျေညာခြင်းမရှိဘဲ အဘယ့် ကြောင့်ခရစ်ယာန်များက ကိုးကွယ်ကြသနည်း။ဤမေးခွန်းသည် ရိုးရှင်းသော်လည်းသာမန်အားဖြင့်ဖြေ ဆိုရန်ခက်ခဲသည့်မေးခွန်းဖြစ်သည်။ဟုတ်ပါသည်။ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ယေရှုက မိမိသည်ဘုရားဖြစ်ကြောင်းနှင့် မိမိအားကိုးကွယ်ကြရန်ပြောထားသည်ကျမ်းချက်မရှိပါ။အဘယ့်ကြောင့်နည်း။
နှိမ့်ချစွာဖြင့် လူ့ဇာတိကို ခံယူခြင်း။ ယေရှုသည် ဘုရားစင်စစ်ဖြစ်သော်လည်း မိမိ၏ဘုန်း စည်းစိမ်အသရေကိုစွန့်ကာ၊မိမိကိုယ်ကို အစေခံကျွန်၏သဏ္ဍာန်ကို ယူကာ လက်ဝါးကားတိုင် အထိနှိမ့်ချလျက် ဆင်းကြွလာကြောင်းဖော်ပြထားသည် (ဖိလပ္ပိ ၂း၆-၈)။ထို့အပြင် မိမိသည် သူတပါးကို စေစားခြင်း ငှာကြွလာခြင်းမဟုတ်ဘဲ သူတပါးအစေကိုခံခြင်းငှာ သာကြွလာကြောင်း အတိအလင်းကြေညာ ထားသည် (မဿဲ ၂၀း၂၈၊မာကု ၁၀း၄၅)။ဆိုလိုသည်မှာ လူတို့၏အစေကိုခံဖို့ရန်သာ ကြွလာ သောကြောင့်လူတို့အား အမိန့်ဖြင့် အာဏာပြရန်မဟုတ်ကြောင်းနားလည်ရသည်။ထို့ကြောင့် ယေရှုသည် မိမိသည်ဘုရားဖြစ်ကြောင်းမကြေညာခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။မိမိအားကိုးကွယ်ရန်မပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ယေရှုက မိမိသည် ဘုရားဖြစ်ကြောင်း တိုက်ရိုက် မပြောထားသော်လည်း မိမိလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်စကားများက သူသည်ဘုရားဖြစ်ကြောင်းသက်သေထူလျက် ရှိသည်။
ဖိလိပ္ပိ ၂း၁၁ တွင် လူတိုင်းမိမိနှုတ်ဖြင့်ယေရှုသည် သခင်ဖြစ်တော်၏ ဟုဝန်ခံကြမည့်အကြောင်းအတိအလင်းဖော်ပြထားသည်။သခင်ဟူသော စကားသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်း ဟေဗြဲစကားတွင် YHWH ဆိုသည့်စကားလုံးက်ုိဘာသာပြန်ထားဖြင်းဖြစ်၍ ဂရိဘာသာဖြင့် ဓမ္မသစ်တွင် kurious ဟူသောစကားစုကိုပြန်သုံးထားသည်။YHWH ဟူသောစကားလုံးသည် ဓမ္မဟောင်းခေတ်တွင် ဂျူးလူမျိုးများမှ အလွန် ပင်အထွဋ်အမြတ်ထားသော အမည်နာမဖြစ်သည်။သာမန်အားဖြင့် မခေါ်ရဲသည့် ဘုရားသခင်၏နာမည် ဖြစ်သည်။ထိုအမည်နာမအားမခေါ်ရဲကြသောကြောင့် Adonai ဟူ၍ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ယေရှုသည် ဒါဝိ မိမိအားသခင်ဟု ခေါ်ကြောင်းကို မိမိ၏ ရှေးမဆွကပင်တည်ရှိသောဘုရားဖြစ်ကြောင်း ရည်ညွှန်း၍ပြောဆိုခဲ့ သည် (မဿဲ ၂၂း၄၄)။ဤနေရာတွင်ယေရှုသည် ဆာလံ ၁၁၀း၁ ကို ပြန်လည်ကိုးကား၍ မိမိ၏သရုပ်မှန်ကိုဖော် ပြနေကြောင်းသံသယကင်းစွာနားလည်ရသည်။ဟေဗြဲ ၁း၁၀ တွင်လည်း ဆာလံ ၁၀၂း၂၅ အားကိုးကား၍ ယေရှုအား သခင်အဖြစ်ခေါ်ဝေါ် အသိမှတ်ပြုကြောင်းထောက်ပြ ထားသည်။ယောဟန် ၂၀း၂၈ တွင်လည်း သောမမှ “အကျွန်ုပ်၏အရှင် (သခင်)၊အကျွန်ုပ်၏ဘုရား” ဟုဝန်ခံထားသည်။လုကာ ၂း၁၁ တွင်လည်း “သခင်ခရစ်တော်တည်းဟူသော ကယ်တင်ရှင်” ဟုဖော်ပြထားသည်။
ဖြစ်တည်ခြင်းဟုဆိုရာ၌ ယေရှုသည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်၍ သူ၏အမည်နာမနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေသည်။ဓမ္မဟောင်းကာတွင် ဘုရားသခင်မှမောရှေအား ထင်ရှားသည့် အခါ မောရှေအား “ငါဖြစ်သည့်အတိုင်းငါဖြစ်၏” ဟုထင်ရှားခဲ့သည် (ထွက် ၃း၁၄)။ “ငါဖြစ်သည်” ဟူသောစကား သည် မောရှေအားထင်ရှားသော ဘုရားသခင်၏ထူးခြားသောအမည်နာမပင်ဖြစ်သည်။ဤစကား စုကို ဓမ္မသစ်ခေတ်၌ ယေရှုကပြန်လည်အသုံးပြုကြောင်းတွေ့ရသည်။ဂျူးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် စကားအချေအတင်ပြောဆိုရာတွင် “အာဗြဟံမရှိမှီ၊ငါရှိ၏ (Before Abraham was, I am) ဟုမိန့်တော်မူပါသည် (ယော ၈း၅၈)။ ဤနေရာတွင် “I am” ဟူသောစကားစုသည် ပစ္စုပ္ပန် ဖြစ်ဆဲကာလကိုသုံးထားသည်။ ဆိုလိုသည် မှာ ယေရှုသည် မိမိ၏ထာဝရဖြစ်တည်ခြင်းကိုဖော်ပြထားသည်။လူသားများနည်းတူ အချိန်အပိုင်း အခြားက ကန့်သတ်ထားခြင်းခံရသူမဟုတ်ဘဲ ထိုပိုင်းခြားတတ်သည့် အချိန်ကိုပင်အစိုးရသူဖြစ်ကြောင်းကို သူ၏ စကားများအားဖြင့်နားလည်ရသည်။ထို့ကြောင့် “ငါဖြစ်သည်” ဆိုသည့်ဂုဏ်ပုဒ်အမည်နာမကို ယေရှုပိုင်ဆိုကြောင်းတွေ့ရသည်။
ဤနေရာတွင်ယေရှုပိုင်ဆိုင်သည့် အရည်အချင်းများကိုဆိုလိုသည်။ယေရှု သည်ဘုရားသခင်သာ ပိုင်ဆိုင်သည့် နေရာတကာ၌တည်ရှိခြင်း၊အလုံးစုံကိုသိခြင်း၊အခွင့်အာဏာ ရှိခြင်း ဆိုသည့်ဂုဏ်ပုဒ်များကိုပိုင်ဆိုင်သည်။မိမိတပည့်တော်များ အား “ကပ်ကမ္ဘာကုန်သည့်တိုင် အတူရှိမည့်” အကြောင်း ကတိတော်ရှိခဲ့သည် (မဿဲ ၂၈း၂၀)။ကောင်းကင်ဘုံတွင်စံနေသော်လည်း မိမိရဲ့ နေရာတကာ တည်ရှိနိုင်စွမ်းကို ထင်ဟပ်စေသည် (cf. ယော ၁၄း၂၃၊ဧဖက် ၃း၁၇၊ကောလော ၁း၂၇၊ဗျာ ၃း၂၀)။
ထို့အပြင် ယေရှုသည် အလုံးစုံကိုသိတော်မူသောသူဖြစ်သည်။ထိုအလုံးစုံကိုသိခြင်း ဆိုသည် ဘုရားကသာ ပိုင်ဆိုင်သည့်အရည်အချင်ဖြစ်သည်။သူသည် လူတို့၏စိတ်အကြံစည်များကို သိတော်မူသည် (ယော၂း၂၅)။လူတို့၏ အခြေအနေကို မမြင်ဘဲသိနိုင်သည် (ယော ၄း၁၈)။ သူ၏တပည့်တော်များက ယေရှု၏ အလုံးစုံကိုသိတော်မူခြင်းကို အမှတ်ရကြသည် (ယော ၁၆း၃၀)။သူ၏ကြိုတင်ပြောဆိုချက်များပြည့်စုံလာခြင်းက သူ၏အလုံးစုံကိုသိခြင်းအားသက်သေထူသည် (မဿဲ ၁၆း၁၂၊၁၇း၂၂၊၂၀း၁၈-၁၉၊၂၆း၁-၂)။ဆက်၍ မိမိသည် အလုံးစုံကိုတတ်နိုင်ကြောင်းအတိအလင်းကြေညာခဲ့သည် (မဿဲ ၂၈း၁၈)။အပြစ်ကိုလည်းလွှတ်ပိုင်သောသူဖြစ် သည် (မာကု ၂း၅၊၉-၁၀)။အထူးသဖြင့် အပြစ်လွှတ်ပိုင်သော အခွင့်သည် ဘုရားသခင်က သာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။လူက အပြစ်လွှတ်လို့မရပါ။
မနေ့၊ယနေ့၊ နောင်ကာလမပြောင်းလဲသော အရှင်ဖြစ်ကြောင်း ဟေဗြဲ ၁၃း၈ တွင် ဖော်ပြထားသည်။မပြောင်းလဲသော သဘောသည် ဘုရားသခင်၏ အရည်အသွေးသာဖြစ်သည် (မာလခိ ၃း၆၊ယာကုပ် ၁း၁၇)။
အသက်ပေးပိုင်သောယေရှု။ ယေရှုသည် ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းနှင့် အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ် ကြောင်း ပြတ်သားစွာကြေညာခဲ့သည် (ယော ၁၁း၂၅)။ထိုအရည်အချင်းသည် ဘုရား၌လျှင်ရှိသည်။ ထို့အပြင် “ငါသည် လမ်းခရီး၊သမ္မာတရား၊အသက်ဖြစ်သည်” ဟုရဲဝင့်စွာအာမခံထားသည် (ယော ၁၄း၆)။ယေရှုက သူသည်မိမိအသက်ကို အလိုအလျောက်စွန့်၍ အလိုအလျောက်ပြန်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်း အတိအလင်း မိန့်ဆိုထားသည် (ယော ၁၀း၁၈)။ထို့ကြောင့်သည် ယေရှုသည်မိမိ၌ ဘုရားဖြစ်ခြင်း လက္ခဏာ သက်သေ များကိုထူလျက်ရှိသည်.သံသယရှိစရာလုံးဝမရှိပေ။
အထက်ပါ သမ္မာကျမ်းစာအထောက်အထားများအားဖြင့် ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏ သားတော်အဖြစ် ဘုရားနှင့် ဆက်နွယ်ခြင်းကို သက်သေထူခြင်းဖြစ်ပြီး၊ မိမိနှုတ်တော်ထွက်စကားများနှင့် လုပ်ဆာင်မှုများအားဖြင့် လည်း ယေရှုသည် ဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို သံသယမရှိ တွေ့မြင်ရသည်။
ယေရှုတွင် လူ့သဘာ၀နှင့် ဘုရားသဘာ၀နှစ်ခုရှိသည်။ထိုအချက်ကို ကောင်းစွာနားလည်ရန်လိုအပ် သည်။သမ္မာကျမ်းစာ၏သွန်သင်မှုများကို ကောင်းစွာပိုင်းခြားသဘောပေါက်ရန်လိုအပ်သည်။ယေရှုသည် မိမိကိုယ်ကို ဘုရား ဖြစ်ကြောင်းမကြေညာခဲ့သော်လည်း မိမိလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် စကားအားဖြင့် မိမိသည် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းသက်သေထူလျက်ရှိသည်။ထို့ကြောင့် ဗျာဒိတ် ၂၁း၆ တွင် “ငါသည် အာလဖဖြစ်၏၊ဩ မေဃလည်းဖြစ်၏။အစနှင့်အဆုံးလည်းဖြစ်၏” ဟူ၍မိမိ၏သရုပ်အမှန်ကို ဖော်ပြထားသည်။ထို့ကြောင့် ယေရှုသည် ကိုးကွယ်ထိုက်သော အရှင်၊သခင်နှင့် ဘုရားဖြစ်ကြောင်းနားလည်ရပါသည်။